ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ – ဝင်းမေတ္တာ
ဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ
၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် မကွေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့ ဖိုလေးလုံးရွာ ဇီနာလင်္ကာရကျောင်းတိုက်၌ ရှင်သာမဏေအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ရဟန်း ခံယူကာ မန္တလေးမြို့ အတုလကာရီဆင်မင်းကျောင်း၊ ဘုရားကြီးတိုက်၌ ဗုဒ္ဓပါဠိဘာသာရပ်ကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ သာသနာရေး ဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပသော ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် “သာသနာ့ဓမ္မစရိယ” ဘွဲ့ကို သာသနာရေး ဦးစီးဌာနမှ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ဆရာတော်သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့၊ ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတအသင်း၏ ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲကို အောင်မြင်၍ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် “ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတဓမ္မာစရိယ” ဘွဲ့ကို ထိုအသင်းမှ ဆရာတော်အား ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ “ပရိယတ္တိသာသနာ့ဟိတဓမ္မာစရိယဘွဲ့”သည် ပါဠိဘာသာစကားနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများကို သင်ကြားနိုင်သော ဆရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဘိဝံသဘွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိလေ့လာရေးတွင် PH.D နှင့် ညီမျှသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးတိုက်၌ ပါဠိဘာသာ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပသောဓမ္မစရိယစာမေးပွဲ မေးခွန်းမေးမြန်းသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး ကော်မတီ၏ နိုင်ငံတော်
အရှင်ဇနကဘိဝံသသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဖားအောက်တောရ တရားစခန်း (ပင်မ) သို့ ကြွရောက်ခဲ့ပြီး ဖားအောက် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ထံတွင် သမထ နှင့် ဝိပဿနာ တရားများကို သင်ယူ လေ့လာကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ခြောက်လအထူးတရားစခန်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထပ်မံ၍ လေးလ တရားစခန်းတွင် ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို သင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်သည် ၂၀၁၅ တွင် မေမြို့၌ ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးမှ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတော်များအား အထူးသင်ကြားပေးသော သင်တန်းကို မေမြို့၌ ဝါဆို၍ သင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက စင်္ကာပူရှိ Pa-Auk တရားစခန်းတွင် သီတင်သုံးခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်သည်။ မြန်မာ၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် အမေရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားတွင် ကမ္မဋ္ဌာန်းပညာများကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
ဆရာတော် ဇနကာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် Zoom Online ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား သင်တန်း။
Sayadaw U Janakābhivamsa
Born in 1976 in Magway, Venerable Janaka ordained asanovice monk (Sāmaṇera) atamonastery in Magway on 16 June, 1991. He received the higher ordination asaBhikkhu on 20 June, 1995 at Atulakari Sinmin Monastery, Phaya Gyi Taik in Mandalay, where he studied Buddhist Pali studies.
Bhante passed the Sasanadhaja Dhammacariya examination held by the Department of Religious Affairs, Ministry of Religious Affairs, Government of the Union of Myanmar, and he was awarded the title of “Sasanadhaja Dhammacariya” on 18 July, 2002. He also passed the Pariyatti Sasanahita Dhammacariya examination conducted by Pariyatti Sasanahita Association of Mandalay city in 2002, and Bhante was awarded the title of “Bhanddanta Janakabhivamsa Pariyatti Sasanahita Dhammacariya” (Abhivamsa degree) on 17 July, 2002. The Pariyatti Sasanahita Dhammacariya examination is well recognised as the highest level of teacher of Pali language and the teachings of the Buddha. The Abhivamsa degree is equivalent to PH.D in Buddhist Pali Studies.
Venerable Janaka came to Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Main) in 2005 and learned and practised Samatha & Vipassana meditation under Venerable Pa-Auk Sayadaw (“Sayadawgyi”). He had further trained during the Six Month Intensive Meditation Retreat in 2010 and also during the Four Month Intensive Meditation Retreat in 2013 under Sayadawgyi. Bhante spent Vassa 2015 in Maymyo practicing where Sayadawgyi is teaching an Intensive Meditation Retreat for Advanced Meditators. Bhante is the Resident Teacher of Pa-Auk Meditation Centre in Singapore since 2014.